Maitiro ekuona iwo maGrammy Awards anorarama kubva kuApple zvishandiso | Ndinobva mac
Maitiro ekuona maGrammy achirarama kubva kuMac, iPhone, iPad, Apple TV uye iPod touch
Sezvaungangove uchitoziva, munguva pfupi iri kutevera maGrammy Mbairo ichaitika, segore rega rega, umo vazhinji vevaimbi vanozoita mhenyu kuti vakunde, chimwe chinhu chinowanikwa nevakawanda chinoshamisa, uye izvi Izvi zvakajairika kana uchida kuzviona. rarama, uye pano tiri kuzokuratidza kuti ungazviita sei.
Uye ndezvekuti, mune ino kesi, chokwadi ndechekuti zvakapusa, kunyangwe chiri chokwadi icho Mazhinji sarudzo dzatiri kuzokuratidza kuti wakabhadharwa, kunyangwe mune mamwe acho uchizokwanisa kutanga yemahara muedzo Uye, nenzira iyi, nakidzwa nemaGrammys pasina dambudziko kubva kune yako iPhone, iPad, iPod touch, Mac kana kunyange Apple TV, sezvatichaona.
Saka iwe unogona kuona iyo Grammy gala inorarama kubva kuApple zvishandiso
Sezvatakataura, pane mikana yakawanda yekunakidzwa neGrammy Awards inorarama. Yokutanga yavo, Chete kana iwe uchigara kuSpain, iwe unozogona kuzviita kubva kuMovistar + kana iwe wakazvishandira, iyo iwe yaunogona kushandisa iyo decoder yakapihwa neanoshanda, chishandiso chayo chemafoni nhare, uye kunyangwe kubva kune rako peji rewebhu pane macOS.
Nekudaro, chokwadi ndechekuti iyi haisiyo yega sarudzo, nekuti iwe unogona zvakare kushandisa, kana iwe usina Movistar + chibvumirano kana iwe uine pasuru isingaisanganise, iyo yepamutemo svikiro iyo iyo ichange ichitepfenyurwa parutivi, iyo mune ino kesi inoitwa kuburikidza neCBS. Kune izvi, pane sarudzo mbiri dzinosiyana zvichienderana nemidziyo, asi chaizvo izvo zvaunofanirwa kuita kutanga iyo yemazuva manomwe-emahara kuyedzwa, uye kuikanzura kana usiri kufarira kana wapedza. Nenzira iyi, pane sarudzo mbiri:
Kubva kune yepamutemo webhusaiti: Kana iwe uine Mac kana chero komputa, kuti ukwanise kuwana nhepfenyuro, uchafanirwa kushandisa peji rewebhu, kwaunofanirwa kupinda mukati kana kunyoresa uye, nenzira iyi, iwe unokwanisa kuwana kuti uone. iwo maGrammy Awards kana vangotanga pasina dambudziko kubva kubhurawuza rako.
Kubva kuapp yeIOS uye tvOSKune rimwe divi, kana iwe uine iPhone, iPad, iPod touch kana Apple TV, zvaunofanirwa kuita kurodha pasi yepamutemo CBS app wobva wapinda mukati. Sezvo pawebhu, unogona kupinda uye unakirwe nekutepfenyurwa pasina dambudziko.
Saka kana uchifarira, Iwe chete unofanirwa kushandisa imwe yeaya matatu ekutanga nzira kupokana maGrammys anorarama. Rangarira kuti mibairo iyi inoitwa na2 am, Spanish peninsular nguva, saka unofanirwa kusunganidzwa kumberi kuti usarasikirwa nechinhu uye uve wakagadzirira kuona vaunofarira maartist vachiita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekuona maGrammy achirarama kubva kuMac, iPhone, iPad, Apple TV uye iPod touch
4 mwedzi yeApple Music yevashandisi veShazam
Nyowani yakagadziridzwa MacBook Air uye Mac mini inosvika muApple Stores mune dzimwe nyika